Akara ngwongwo DWB 300W maka Street Lighting China Manufacturer
Nkọwa:Akụrụngwa a na-akwụ ụgwọ,Ihe nkesa nke DLC,Ngwongwo Ntughari nke Led maka Light Street
Home > Ngwaahịa > Ihe nnweta ozuzu ọkụ > Akara ngwongwo DWB 300W maka Street Lighting
Ihe Nlereanya.: BB-SDD-300WD1
[Nnukwu ihe] - Ihe ntanye nke anyị 300w maka Street Lighting na- enye 39000 lumens na ihe siri ike Lumen Efficacy nke 130 lm / W iji dochie 1000W MH / HPS / HID mmezi ọdịnala nke ọma, na-azọpụta 90% nke ego na ego gị , 5500K ìhè na-acha ọcha na-achi achi a nnukwu ọkụ ọkụ ahụmahụ.
[ỌKỤRỤ EZIGBO] - Anyị na-eji nnukwu eletriki LED maka nke a Ihe ngbachapu DLC maka izu ahia iji nweta 130 lumens per watt na ibe nwere 85+ CRI Rating maka doro anya agba. Meanwell Driver maka Akụrụngwa Ngwá Ọrụ Dị na ya bụ nnukwu arụmọrụ, ogologo ndụ na ntụkwasị obi siri ike. Usoro dị mma ka mma maka akụrụngwa ngwongwo anyị nke L maka 1000W Metal Halide ya na ikpo ọkụ ọkụ nke aluminum na onye na-agba ọsọ dị elu na-egosi na ọ dị ogologo oge arụ ọrụ na obere okpomọkụ ọrụ.
[NKWA NA MGBE NWA NA NHỊTA] - Ọkụ anyị na-ere Kuki bụ nkwụnye na Play Kere na ntụgharị site na E39 ruo E26 nke nwere oghere. Nke a L ed Retrofit Kit maka ịrịba ama na-abịa na kemeghi mgbodo mere maka kwụ na vetikal arịọnụ. Ihe nkwụnye ihe eji emepụta L ed zuru ezu maka ebe a na-adọba ụgbọala, ọkụ ọkụ n'okporo ámá, ihe eji eme gas, akpụkpọ ụkwụ, mgbidi mgbidi, mkpuchi mmiri, ọkụ mmiri, nnukwu ụlọ mmiri, ect.
1. Ụdị ogo 120 degrees
2. MH / HPS / HID / MHL / CFL nkwụnye ọkụ
3. Nwepu isi Direct Wụnye site na ntụgharị ballast
4. 100% Ọkụ na-ekpo ọkụ
5. Isi ihe niile E39
6. Ogologo oke agba na ogo Kelvin (K), 2700-6700K
7. Njikere redio ọkụ ọkụ
8. DLC ETL CETL CE ROHS depụtara B bụ Led Retrofit Kits
Akụrụngwa a na-akwụ ụgwọ Ihe nkesa nke DLC Ngwongwo Ntughari nke Led maka Light Street